Madaxweynihii Hore Ee Soomaaliya Sheekh Shariif Oo U Kicitimay Dalka Maraykanka Kulana La Yeeshay Wasiirka Gaashandhiga Somaaliya Mr: Fiqi | lughayanews
Madaxweynihii Hore Ee Soomaaliya Sheekh Shariif Oo U Kicitimay Dalka Maraykanka Kulana La Yeeshay Wasiirka Gaashandhiga Somaaliya Mr: Fiqi
Kampala(Lughaya.com)Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG aheyd Shariif Sheekh Axemd ayaa shalay u dhoofay dhanka dalka Mareykanka kadib markii uu casumaad ka helay mid ka mid ah jaamacadaha dalkaas.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Kampala ee Entebe kusii sagootiiyey madax ka tirsan dowladda Soomaaliya oo uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhiga C/xakiim Max’ud Xaaji Fiqi.
Madaxweynaha ayaa waxaa casumay Jaamacad ku taalla magaalada Boston ee dalka Mareykanka, faahfaahin badanna lagama hayo sababata uu halkaas u tegayo.
Wararka qaar ayaa sheegaya in Shariif Sheekh Axmed halkaas ku diyaarinayo darajasa Masterk-ka, islamarkaana jaamacadda ka jeedin doono Khudbado ku saabsan waxyaabihii uu Soomaaliya ka qabaty tan iyo markii uu madaxda ka ahaa Maxkamadihii Islaamiga ahaa jaamacada Boston ayaa ah jaamacad inta badan ay madaxweynasha lagaga Adkado doorshada ee si nabad galyo ah ugu taga xukunka ay Khudbado sharaf ka jeediyaan taas oo madaxweynaal badan oo caalamka soo xukumay ay hore ugu jeediyeen Khudbado.
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa dowladda Uganda ka helay deganaasho laga siiyey magaalada Kampala, kadib markii uu ka guuray magaalada Muqdisho bishii November ee sanadkii hore, iyadoo madaxweynaha xilligan Xasan Sheekh uu uga guuleystay doorashadii bishii September ka dhacday Muqdisho.
« Dowladda Soomaaliya Oo Canbareysay Howlgalkii Ciidamada Faransiisku Ka Gaysteen Deegaanka Buulo Mareer Deeqo lacageed oo la soo gaadhsiiyey dadkii waxyeeladu ka soo gaadahay baanaabixii xoraynta Saylac+SAWIRO »